ओली र प्रचण्ड किन गए शीतल निवास ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ४ मंसिर २०७६, बुधबार १४:०३ लेखक Sabita Roka
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिएर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका छन् ।
विहान ११ नबज्दै राष्ट्रपति भवन पुगेका ओली र प्रचण्ड पौने एक बजेसम्म शीतल निवासमै थिए ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि बोलाइएको पार्टीको सचिवालय बैठक केही घन्टापछि सोरेर राष्ट्रपतिसँग के छलफल भयो ? यसबारेमा खुलाइएको छैन । तर नेताहरुले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुअघि अध्यक्षद्धयले भेट्दा राष्ट्रपति राजनीतिक रुपमा सक्रिय रहेको सन्देश जाने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उसो त नेकपाभित्र नेताहरुलाई सन्तुलन मिलाउनेदेखि राजनीतिक नियुक्तिहरुमा समेत राष्ट्रपतिको भूमिका रहने गरेको छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद गठनदेखि राजदूत नियुक्तिमा पनि चासो राख्ने गरेको एक नेताले बताए ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा गोकुल बास्कोटा, थममाया थापा र पद्मा अर्याल राष्ट्रपति निकट मानिन्छन् । त्यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि राष्ट्रपति निकटस्थ मानिन्छन् ।
पछिल्लो समय ओली र बामदेव गौतमलाई मिलाउनसमेत राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।
तत्कालिन नेकपा एमालेमा केपी ओली गुटमै पनि भण्डारीको अलग्गै र बलियो उपगुट थियो । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिने गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
यो पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने निश्चित भएपछि राष्ट्रपतिले हट्ने र नयाँ आउने मन्त्रीबारे चासो राखेको हो वा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं जानकारी दिन गएका हुन् ? यो प्रष्ट भएको छैन । तर सचिवालय बैठकमा छलफल नगरी राष्ट्रपतिसँग अध्यक्षद्वयले परामर्श गर्नुले राष्ट्रपति पदको अनावश्यक राजनीतिकरण हुनेतर्फ केही नेताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपति पार्टीभन्दा माथि हुनुहुन्छ । उहाँले पार्टीभित्र माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चासो दिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले पनि पार्टीमा छलफल नगरि शीतल निवासमा छलफल गर्दा विवाद हुनसक्छ ।’
काठमाडाैं । भारतीय पक्षले पूर्वसूचनाबिना कोसी नदीको धारलाई फर्काएपछि सप्तरीको हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिका–१३ को गोबरगाढा डुबानमा परेको छ ।
‘माया त लाउने हो’ मा दीलिप र मरिस्का
काठमाडौं । गायक शंकरलाल श्रेष्ठको आवाज रहेको ‘माया त लाउने हो’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतको शब्द…
डा. केसी र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति: आज अनशन तोड्ने, यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति !
काठमाडाैं । सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार मध्यराति पाँचबुँदे…
तातोपानी सीमानाका नखुल्दै यस्तो चलखेल
काठमाडौं । तातोपानी नाका २०७६ जेठ १७ बाट संचालनमा आउँदैछ । तातोपानी नाका संचालन नहुँदै विगतमा रक्तचन्दन तस्करीमा सेटिङ…
यसरी हटयो रेस्टुरेन्टमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क
काठमाडौँ । रेस्टुरेन्टको खानपछि बिलमा उपभोक्ताले तिर्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाइएको छ । रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल…
‘सबै सीमा विवाद सुल्झिएको सरकारी दाबी आधारहीन, सिमानामा काँडेतार लगाऊ’-विद्यार्थी संगठन, ‘देशको एक इन्च भूमि पनि मिच्न दिन्नँ’ देउवा !
काठमाडौं । वाम घटक दुई विद्यार्थी संगठनले पर्साको छपकैयामा नेपाली भूमि…